Maxaa burburiyay heshiiskii weynaa ee hadda ka hor lagu mideyn lahaa Ronaldinho iyo Zidane?… (Dalkee ayayna ka wada ciyaari lahaayeen?) – Gool FM
Haaruun January 20, 2022
(Yurub) 20 Jan 2022. Dadka daawada cayaaraha kubadda cagta waxay isku raacsan yihiin in xiddigii hore ee reer Brazil Ronaldinho oo lagu naaneyso ‘Saaxirka kubadda cagta’ uu dabcan yahay mid ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa ee taabta kubadda cagta, laakiin wareysi la la yeeshay laacibkii hore ee Barcelona Ronaldinho ayaa wuxuu ku sheegay in uu isna ka heybeysan jiray laacibkii hore ee reer France iyo Real Madrid ee Zinedine Zidane.
Wareysigan oo uu Ronaldinho siiyay ‘Futbol Emotion’ ayaa wuxuu yiri: “weligeey waan la dhacsanaa Zizou, nasiib fiicanna uma aanan yeelan in aan mar uun garoonka la galo oo aan isku koox ka wada ciyaarno, waan jeclaan lahaa in arrintaasi ay ii suuro gasho”.
Arrintan ma ahayn mid mustaxiil ah, waxaana ay ku dhoweyd in ay hir gasho inkastoo Zinedine Zidane uu aakhirkii ku gacan seyray qorshihii lagu mideynayay isaga iyo Ronaldinho, kaasoo ahaa heshiis culus oo labadooduba ay markii hore oggolaadeen kaas oo kaga yimid Waddanka Qatar.
Sanadkii 2005 oo ahaa sanad ay Ronaldinho iyo Zizou marayeen heerkii ugu fiicnaa waayahooda ciyaareed ayaa waxaa sida uu qoraagga Faransiiska ah ee Fred Hermel ku qoray buugga Taariikhda Zidane uu sheegay in sanadkaasi Amiir Nasiimka Qatar uu qorshahan yaabka leh ee uu ku mideynayo Ronaldinho iyo Zizou u soo bandhigay labada ciyaartooy, nasiib darro Zidane ayaa heshiiskaasi iska diiday.
Haddaba maxay ahayd sababtii uu Zidane u diiday in uu ka garab ciyaaro Ronaldinho? Ma isagoo aan ogoleyn in uu la dheelo laacib ka soo dheelay Barcelona? Maya, arrinku sidaa ma ahayn.
Sida uu xusay Fred Hermel waxaa Zidane uu waqtigaa doonayay in uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo geba gebeeyo isagoo ka ciyaaraya mid ka mid ah kooxaha heerka sare ee Caalamka, halkii uu ka ciyaari lahaa horyaalka Qatar.
Markii ay intaa dhacday ayaa Ronaldinho waxaa isna qudhiisu uu ku gacan seyray in uu kaligiis aado horyaalka Qatar, taas oo niyad jab ku ridday Amiir Nasiim iyo taageerayaasha kubadda cagta qaarkood.
Dhanka kale Zidane ayaa ciyaarihiisa ku soo dhameeyay kooxda Real Madrid oo ka mid ah naadiyada ugu tunka weyn caalamka, inkastoo ciyaartiisii ugu dambeysay ee xulka Faransiiska oo ahayd dhammaadkii ama final-kii Koobkii Adduunka ee lagu ciyaaray Jarmalka 2006 gaar ahaan kulankii Talyaaniga iyo Faransiiska uu Zidane hertiyay daafaca Talyaaniga ee Marco Materazzi kaddib markii ay xoogaa hadallo kulkulul is dhaafsadeen, kaddibna waxaa Zidane la siiyay kaarka cas, Koobkina waxaa qaaday xulka Talyaaniga.
Intii lagu guda jiray ciyaarihii Koobkii Adduunka ee 2006 waxaa Faransiiska iyo Brazil ay isaga hor yimaadeen siddeed dhammaadkii tartankaasi, waxaana ciyaartaasi Zidane uu aad uga gacan sarreeyay Ronaldinho, isagoo soo bandhigay farsamooyin cajiib ah, waxaana ciyaartaasi 1-0 ku badiyay Faransiiska, goolkaa uu u saxiixay weeraryahankii hore ee Faransiiska iyo kooxda Arsenal ee Thierry Henry.
Sababihii ugu weynaa ee uu Zidane ugu biiray caalamka tababarenimada ayaa ahayd si sumcad xumaddii uu ciyaaraha kubadda cagta kaga baxay uusan ku sagootin taageerayaashiisii kubadda cagta, waxaana uu doonayay in uu sumcaddiisii dib u soo ceshado.